WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (8) မျိုး - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ဗဟုသုတများ > WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (8) မျိုး
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:23 PM နည်းပညာဗဟုသုတ, ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အင်တာနက် လိုင်းကောင်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့အပျော်က တခြားအပျော်တွေနဲ့ မတူပါဘူး ။ အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ် ။ WiFi လိုင်းမကောင်းတာက တစ်ခါတလေ operator နဲ့ သက်ဆိုင်သလို တစ်ခါတလေကျတော့လည်း အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ် ။
သတ္ထုတွေက လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပါတယ် ။ WiFi က လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို ထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် သတ္ထုမျက်နှာပြင် ဒါမှမဟုတ် သတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက် လှိုင်းတွေကို ဟန့်တားနေမှာပါ ။ အဲဒါကြောင့် WiFi စက်ကို သတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသင့်ပါတယ် ။
2. အုတ်နံရံ ၊ ကျောက်နံရံ
တချို့နံရံ အမျိုးအစားတွေက WiFi ကို လိုင်းမကောင်းစေပါဘူး ။ စကျင်ကျောက် ၊ ဘိလပ်မြေ ၊ ကွန်ကရစ် ၊ အင်္ဂတေနဲ့ အုတ်တွေက WiFi လိုင်းကို ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းဖြစ်စေပါတယ် ။ နှစ်ထပ် အိမ်တွေမှာဆိုရင် တစ်ထပ်က လိုင်းမကောင်းတတ်ပါဘူး ။ အဲဒါကြောင့် WiFi စက်ကို နံရံတွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသင့်ပါတယ် ။
မှန်က ပုံရိပ်တွေကို ထင်ဟပ်စေသလို WiFi ရဲ့ လျှပ်စစ် လှိုင်းတွေကိုလည်း ပြန်လည် ထင်ဟပ်စေပါတယ် ။ မှန်က WiFi အတွက် ဒိုင်းလို ဖြစ်နေပြီး အင်တာနက်လိုင်းကို ပြန်လှည့် သွားစေပါတယ် ။ မှန်နားမှာ WiFi စက်ကို ထားရင် အင်တာနက်လိုင်း မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေမှာပါ ။
ရေက ကြိုးမဲ့ လှိုင်းတွေဆီက အချို့ စွမ်းအင်တွေကို စုပ်ယူတာကြောင့် အင်တာနက်လိုင်းရဲ့အရည်အသွေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်စေပါတယ် ။
အရောင်စုံတဲ့ ခရစ်စမတ် မီးသီးတွေက WiFi လိုင်းကို အားနည်းစေပါတယ် ။ ခရစ်စမတ်မီးသီးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ chip တွေက WiFi ရဲ့ လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ် ။ ဒီဇင်ဘာလရောက်ရင် WiFi စက်ကို ခရစ်စမတ်သစ်ပင်နဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ် ။
ကွန်ပြူတမော်နီတာက 2.4GHz ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး WiFi ကလည်း 2.4GHz ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ။ စက်နှစ်လုံးက တူညီတဲ့ လှိုင်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှတ်တဲ့အခါ data တွေ ပို့ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်လှိုင်းအစား လေလှိုင်းကိုပဲ သုံးပါတယ် ။ ကွန်ပြူတာက အင်တာနက်လိုင်းကို လိုအပ်ပေမယ့် WiFI ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ အရမ်းနီးအောင် မထားသင့်ပါဘူး ။
Droneတွေကလည်း 2.4GHz ကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် model တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ ထုတ်လွှတ်တဲ့ လှိုင်းချင်း မတူနိုင်ပါဘူး ။ အနီးအနားမှာ drone လွှတ်နေရင်လည်း WiFi လိုင်း ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
WiFI စက်က microwave မီးဖိုနားမှာ ရှိရင် WiFi စက်ကို Microwave မီးဖိုထက် မြင့်တဲ့တစ်နေရာကို ရွှေ့ထားလိုက်ပါ ။
1. WiFiစက်ကို အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝေးမယ့် တစ်နေရာမှာ ပြောင်းထားပါ။
2. စက်ကို အမြဲ update လုပ်ပါ ။
3. အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ antenna ကိုပဲ အသုံးပြုပါ ။
4. မှန်းဆရခက်တဲ့ ၊ ခက်ခဲတဲ့ password ကို လုပ်ထားပါ ။
5. WiFi amplifier လို့ ခေါ်တဲ့ WiFi extender ကို သုံးပါ ။
6. WiFi နဲ့ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေကို သုံးပါ ။
7. 5GHz ထုတ်လွှတ်တဲ့ WiFi က 2.4GHz ထုတ်လွှတ်တဲ့ WiFi ထက် အင်တာနက်လိုင်းပိုမြန်ပါတယ် ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ အင်တာနက်လိုင်းက အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာမှာပါ ။
WiFi လိုငျးကို နှောငျ့နှေးစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျး (8) မြိုး
[Unicode]ဖတျရနျ အငျတာနကျ လိုငျးကောငျးတဲ့အခါ ပြျောတဲ့အပြျောက တခွားအပြျောတှနေဲ့ မတူပါဘူး ။ အငျတာနကျ လိုငျးမကောငျးရငျလညျး တျောတျော စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈပါတယျ ။ WiFi လိုငျးမကောငျးတာက တဈခါတလေ operator နဲ့ သကျဆိုငျသလို တဈခါတလကေတြော့လညျး အိမျသုံး ပစ်စညျးတှနေဲ့ သကျဆိုငျနပေါတယျ ။
သတ်ထုတှကေ လြှပျကူးပစ်စညျး ဖွဈပွီး လြှပျစဈဓာတျကို စုပျယူပါတယျ ။ WiFi က လြှပျစဈသံလိုကျလှိုငျးကို ထုတျလှတျတဲ့အတှကျ သတ်ထုမကျြနှာပွငျ ဒါမှမဟုတျ သတ်ထုပစ်စညျးနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ ပရိဘောဂ ပစ်စညျးတှကေ လြှပျစဈသံလိုကျ လှိုငျးတှကေို ဟနျ့တားနမှောပါ ။ အဲဒါကွောငျ့ WiFi စကျကို သတ်ထုပစ်စညျးတှနေဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသငျ့ပါတယျ ။
2. အုတျနံရံ ၊ ကြောကျနံရံ
တခြို့နံရံ အမြိုးအစားတှကေ WiFi ကို လိုငျးမကောငျးစပေါဘူး ။ စကငျြကြောကျ ၊ ဘိလပျမွေ ၊ ကှနျကရဈ ၊ အင်ျဂတနေဲ့ အုတျတှကေ WiFi လိုငျးကို ပွတျတောငျး ပွတျတောငျးဖွဈစပေါတယျ ။ နှဈထပျ အိမျတှမှောဆိုရငျ တဈထပျက လိုငျးမကောငျးတတျပါဘူး ။ အဲဒါကွောငျ့ WiFi စကျကို နံရံတှနေဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသငျ့ပါတယျ ။
မှနျက ပုံရိပျတှကေို ထငျဟပျစသေလို WiFi ရဲ့ လြှပျစဈ လှိုငျးတှကေိုလညျး ပွနျလညျ ထငျဟပျစပေါတယျ ။ မှနျက WiFi အတှကျ ဒိုငျးလို ဖွဈနပွေီး အငျတာနကျလိုငျးကို ပွနျလှညျ့ သှားစပေါတယျ ။ မှနျနားမှာ WiFi စကျကို ထားရငျ အငျတာနကျလိုငျး မငွိမျမသကျဖွဈနမှောပါ ။
ရကေ ကွိုးမဲ့ လှိုငျးတှဆေီက အခြို့ စှမျးအငျတှကေို စုပျယူတာကွောငျ့ အငျတာနကျလိုငျးရဲ့အရညျအသှေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျစပေါတယျ ။
အရောငျစုံတဲ့ ခရဈစမတျ မီးသီးတှကေ WiFi လိုငျးကို အားနညျးစပေါတယျ ။ ခရဈစမတျမီးသီးတှမှော ပါဝငျတဲ့ chip တှကေ WiFi ရဲ့ လြှပျစဈလှိုငျးတှပေျေါမှာ သကျရောကျမှု ရှိပါတယျ ။ ဒီဇငျဘာလရောကျရငျ WiFi စကျကို ခရဈစမတျသဈပငျနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသငျ့ပါတယျ ။
ကှနျပွူတမျောနီတာက 2.4GHz ကို ထုတျလှတျပွီး WiFi ကလညျး 2.4GHz ကို ထုတျလှတျပါတယျ ။ စကျနှဈလုံးက တူညီတဲ့ လှိုငျးတှကေို တဈပွိုငျနကျတညျး ထုတျလှတျတဲ့အခါ data တှေ ပို့ဖို့အတှကျ လြှပျစဈလှိုငျးအစား လလှေိုငျးကိုပဲ သုံးပါတယျ ။ ကှနျပွူတာက အငျတာနကျလိုငျးကို လိုအပျပမေယျ့ WiFI ကို ကှနျပွူတာနဲ့ အရမျးနီးအောငျ မထားသငျ့ပါဘူး ။
Droneတှကေလညျး 2.4GHz ကို ထုတျလှတျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ model တဈခုနဲ့တဈခုတော့ ထုတျလှတျတဲ့ လှိုငျးခငျြး မတူနိုငျပါဘူး ။ အနီးအနားမှာ drone လှတျနရေငျလညျး WiFi လိုငျး ကောငျးမှာ မဟုတျပါဘူး ။
WiFI စကျက microwave မီးဖိုနားမှာ ရှိရငျ WiFi စကျကို Microwave မီးဖိုထကျ မွငျ့တဲ့တဈနရောကို ရှထေ့ားလိုကျပါ ။
1. WiFiစကျကို အထကျက ဖျောပွခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ဝေးမယျ့ တဈနရောမှာ ပွောငျးထားပါ။
2. စကျကို အမွဲ update လုပျပါ ။
3. အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ antenna ကိုပဲ အသုံးပွုပါ ။
4. မှနျးဆရခကျတဲ့ ၊ ခကျခဲတဲ့ password ကို လုပျထားပါ ။
5. WiFi amplifier လို့ ချေါတဲ့ WiFi extender ကို သုံးပါ ။
6. WiFi နဲ့ပတျသကျလို့ နောကျဆုံးပျေါ နညျးပညာတှကေို သုံးပါ ။
7. 5GHz ထုတျလှတျတဲ့ WiFi က 2.4GHz ထုတျလှတျတဲ့ WiFi ထကျ အငျတာနကျလိုငျးပိုမွနျပါတယျ ။
အဲဒါဆိုရငျတော့ အငျတာနကျလိုငျးက အရငျကထကျ ပိုကောငျးလာမှာပါ ။
WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (8) မျိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:23 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အင်တာနက် လိုင်းကောင်းတဲ့အခါ ပျော်တဲ့အပျော်က တခြားအပျော်တွေနဲ့ မတူပါဘူး ။ အင်တာနက် လိုင်းမကောင်းရင်လည်း တော်တော် စိတ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:23 PM